Services _ HiyPay_DeTech Network Service Co,. Ltd
ကစားသမားများနှင့် ဒိုင်ဖြစ်သူတို့ ဖဲ ၂ချပ် (သို့) အများဆုံး ၃ချပ်ရဲ့ အပွင့်တို့ကို ပေါင်း၍ တိုင်းပြီးကစားရမှာဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ။ ။ 2+2=4 ဖြစ်ပြီး4ပေါက်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ 10, J, Q, K တို့အားလုံးသည်0(သုည) ဖြစ်၍ ၄င်းတို့အားလုံးကို ကိန်းဂဏန်းအဖြစ်ထည့်မတွက်ဘဲ ပါဝါအဖြစ်သာထည့်တွက်သည်။ ဥပမာ။ ။ 2+J+7=9 ဖြစ်ပြီး 9ပေါက်ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အပွင့်တူ ၃ချပ်ဆိုလျှင် ဒိုမှလွဲ၍ကျန်အပေါက်အကုန်နိုင်သည်။ ရှမ်းကိုးမီးတွင် အနိုင်နှင့်အရှုံးသာရြှိပီး သရေဟူ၍မရှိပါ။ ၁။ အပေါက်အကြီးဆုံးသည် ၉ဖြစ်၍ အငယ်ဆုံးသည် ၀ (ဘူ) ဖြစ်သည်။ ကြီးစဉ် ငယ်လိုက် သဘောမျိုးဖြစ်၍အပေါက်ကြီးသူသည် ငယ်သောသူကိုနိုင်သည်။ ဥပမာ ၊ ၉သည် ၈ မှ ၀ အထိအကုန်၍ ၈သည် ၉မှလွဲ၍ ကျန်အားလုံးကိုနိုင်သည်။ ကျန်ဂဏန်းအားလုံးသည်လည်း ထိုနည်း၎င်းဖြစ်သည်။ ၂။ အပေါက်ချင်းတူနေလျှင် ပါဝါကြီးသောသူက နိုင်သည်။ ပါဝါကို အောက်ပါအတိုင်း ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် စီနိုင်သည်။ A>K>Q>J>10>9>8>7>6>5>4>3>2> ဆိုလိုသည်မှာ A သည် ပါဝါ အကြီးဆုံးဖြစ်၍2သည်အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာ။ ။ 1+4=5 > K+5=5 ဖြစ်သည်။ ၄။ အပွင့်တူ၊ အချပ်တူ၊ ဂဏန်းတူဖြစ်ပါက ကတ်ပါဝါတိုင်းရမည်။ ကတ်ပါဝါကို အောက်ပါအတိုင်း စီနိုင်သည်။
ကစားရာတွင် ၁။ ၂ချပ်တည်းရှိသည့်အခြေအနေတွင် ပေါင်းခြင်း ၉ (သို့မဟုတ်) ၈ ရပါက အော်တို(ဒို)ဟု သတ်မှတ်သည်။ အော်တိုသည် ကျန်အော်တိုမဟုတ်သည့် အပွင့်အားလုံးကို တန်း၍ အနိုင်ရသည်။ အော်တိုအချင်းချင်းတွင် အပေါက်ကြီးသူ၊ ပါဝါကြီးသူက နိုင်သည်။ ဥပမာ။ ။ အော်တို၉ သည် အော်တို၈ကို နိုင်သကဲ့သို့ အချင်းချင်းတွင် Aပါသူသည် ကျန်သူများကိုနိုင်သည့် သဘောဖြစ်သည်။ ၂။ အပွင့်တူ၃ချပ်တွင်လည်း ထိုနည်း၎င်းဖြစ်သည်။ A ၃ချပ်သည်ပါဝါအကြီးဆုံးဖြစ်၍ 2ချပ်သည် ပါဝါအငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။
၁။ အပွင့်တူ၂ကတ်ဖြင့် အနိုင်ရလျှင် ထိးုကြေး၂ဆ ရမည်ဖြစ်သည်။ ၂။ အပွင့်တူ ၃ကတ်ဖြင့် အနိုင်ရလျှင် ထိးုကြေး၃ဆ ရမည်ဖြစ်သည်။ (သတိပြုရမည် မှာ ၃ကတ်သည် အော်တို(ဒို) ကို မနိုင်ဆိုသည့် အချက်ပင်ဖြစ်သည်။) ၃။ အပွင့်တူ ၃ချပ်ဆိုလျှင် ထိုးကြေး၅ဆ ရမည်ဖြစ်သည်။
၁။ ဒိုင်ကိုင်သူသည်ထိုးကြေး၏ ၁၀ဆတင်ရမည်။ ၂။ ထိုတင်ထားသော ကြေးကုန်သည်အထိ (သို့မဟုတ်) ၀မ်တိန် ၃ကြိမ်ပြီး Bank ပေါက် သည်အထိ ဒိုင်ကိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၃။ ၀မ်တိန် ၃ကြိမ်ဆိုသည်မှာ ဒိုင်ကိုင်သည့် ငွေပမာဏထက် ၃ဆပိုရလျှင် အလိုအလျောက် ၀မ်တိန်ခေါ်ပါမည် ၀မ်တိန် ၃ကြိမ်ပြည့်ပြီးလျှင် သင့်ဒိုင်အလှည့် ပြီးဆုံးပါမည်။ ၀မ်ကြိမ် ၃ကြိမ်ပြည့်ပြီး ကျန်ရှိသည့် ငွေအားလုံး ဒိုင်ကိုင်ခဲ့သူမှ လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ရရှိပါမည်။
Home | About | Services | Career | Contact | Co-operation
Copyright © 2017-2018 DeTech Network Service Co,. Ltd Power by DedeCms
Address:No.18/A, Koh Min Koh Chin, Bahan Township, Yangon.